Yahoo! Search Marketing ... Very ahy ianao! | Martech Zone
Direct Mail dia mpanelanelana lafo vidy. Satria lafo dia tsy azo tanterahina tampoka. Matetika aho no nilaza tamin'ny mpanjifako fa ny fahafaha-misarika ny sain'ny olona iray amin'ny Direct Mail dia mifandray mivantana amin'ny elanelana misy eo amin'ny boaty mailaka sy ny fitoeram-pako. Ny ampahany amin'ny fampielezana mailaka mivantana izay zava-dehibe kokoa noho ny kendrena ary ny sombiny dia ny fahaizana manatanteraka amin'ny fampielezan-kevitra.
Androany dia nahazo sombiny Direct Mail noforonina tsara tarehy aho Yahoo! Search Marketing. Ny tolotra dia $ 75 amin'ny varotra teny fanalahidy sasany amin'ny Yahoo! motera fikarohana. Hatramin'ny nandefasako a tambajotra sosialy ho an'ny Navy Veterans, Efa nanao fitsapana vitsivitsy tamin'ny fividianana teny lakile aho.
Ny printy tsara, mazava ho azy, dia mila mametraka petra-bola 30 tsy azo averina ao anaty kaonty ianao. Na izany aza, 45 $ ny tsindry azoko ampiasaina, na izany aza, dia nanandrana nisoratra anarana aho. miteny aho nanandrana satria nifanena tamin'ity hafatra diso ity aho tsy latsaky ny in-4 tamin'ny fizotry ny fisoratana anarana sy ny fandoavambola:
Direct Mail dia manana zavatra iraisana amin'ny dokam-barotra rehetra. Tsy maintsy afaka mamoaka ny vokatrao na serivisinao ianao raha vantany vao mivoaka eo am-baravarana ilay fanantenana. Ny tsy fahaizana mandefa dia manimba bebe kokoa noho ny tsy fanaovana doka mihitsy. Manantena aho fa ity Yahoo! fampielezan-kevitra dia fanentanana santionany nalefa tamin'ny olona vitsivitsy mba hizaha toetra ny fahaizan'ny rafitr'izy ireo hitantana ny fisoratana anarana sy ny fividianana… fa ny marina no mifanohitra amin'izay. Very ahy izy ireo! Aorian'ny fanandramana 4, tsy hiverina aho.
Yahoo! azo inoana fa nandany an'arivony dolara tamin'ity mailaka mivantana ity. Ary ilay Tale ara-barotra mahantra, izay namolavola sombin-javatra mahafinaritra, angamba no homena tsiny noho ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra.
Raha tsy hoe, mazava ho azy, Yahoo! sendra mamaky ny bilaogiko. 🙂
Tags: Actonmpanangonaorinasa automatisation marketingmpamatsy automatique marketingnaoty automatisation marketingtatitra momba ny automatisation marketinghevitra momba ny automatisation marketingfanandramana marobefanandramana pejymahitsy amin'ny interactive
Vao nandefa $ 1000 tamin'i Noa aho!
Fialam-boly miaraka amin'ny logo… Indy Coffee Shops
27 Novambra 2007 à 10:37
Gaga foana aho rehefa misy orinasa lehibe manakorontana zavatra toy izao. Tsara vintana izy ireo nomenao fahafahana efatra, ny ankamaroan'ny olona dia nijanona voalohany na faharoa. Indrisy anefa ho an'ny "zazakely" raha manao fahadisoana tahaka izao isika dia zara raha hanome antsika fahafahana fanindroany ny mety ho mpanjifantsika.
28 Novambra 2007 à 11:59
Eny, fa lafo ny Direct Mail raha tsy vita araka ny tokony ho izy. Raha vita tsara izany, dia mety ho lafo izany. Mety handany vola bebe kokoa noho ny zavatra mora/maimaim-poana toy ny marketing amin'ny mailaka, saingy mirona hahomby kokoa. Azo refesina, azo amboarina ary azo andrana. Andao hijery radio na TV manao IZANY. (Hoy ilay manampahaizana momba ny DM! 😉 )
28 Novambra 2007 à 12:47
Manaiky aho! Tokony ho niteny aho hoe 'fampiasam-bola lehibe' fa tsy 'lafo'. Tsy fandaniam-bola tokoa izany rehefa vita tsara ary manampy amin'ny fampidiram-bola be. Heck, vonona aho, vonona ary afaka namaly ity ampahany ity!
29 Novambra 2007 à 11:54
Hevitra tsara. Vao tsy ela akory izay ny vondrona marketing an'i Yahoo dia namoy olona tsara indrindra tamin'ny fanombohana sy mpifaninana. Nieritreritra foana aho fa iray amin'ireo mpampianatra ara-barotra mivantana tsara indrindra i Jay Abraham - angamba tokony hiantso azy izy ireo.